भर्खरै काठमाडौं बाट अचानक आयो यस्तो दुखद खबर ! के यस्तो गर्नु सहि कि गलत हो? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/भर्खरै काठमाडौं बाट अचानक आयो यस्तो दुखद खबर ! के यस्तो गर्नु सहि कि गलत हो?
काठमाडौँ, २७ जेठ – प्रहरीले ब`न्दा बन्दी`को उल्ल`ङ्घन गर्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने १० जनालाई निय न्त्रणमा लिएको छ ।
काठमा`डौँको बालुवाटार क्षेत्रमा लकडा`उनको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई आज पानीको फोहरा हानेर हटाइएको र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरी`क्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदर्शनकारीले सरकारले बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरेकामा त्यसको उल्ल`ङ्घन गरी सडकमा समेत अवरोध गरेका थिए । सोही क्रममा पानीको फोहरा हानेर हटाइएको थियो । उनीहरुले सङ्क्रमक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० अनुसार कानून उल्लङ्घन गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारले यही जेठ ३२ सम्म लक डाउनको आदेश जारी गरे पनि त्यसको उल्ल`ङ्घन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा पसल खोल्ने, सवारी स`ञ्चालन गर्ने र हिँड`डुल गर्ने क्रम बढेको छ । आज प्रहरीले विभि`न्न क्षेत्रमा पसल बन्द गर्न खोज्दा समेत अवरोध भएको जनाइएको छ । सरकारले ब`न्दाब`न्दीलाई खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १५ सम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय !
काठमाडौंमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह !!